स्यामसङका २ नयाँ फोन बजारमा, यस्ता छन् विशेषता
काठमाडौं, २७ भदौ । अग्रणी स्मार्टफोन निर्माता कम्पनी स्यामसङले हालै २ वटा नयाँ स्मार्टफोन बजारमा ल्याएको छ । स्यामसङले ग्यालेक्सी ए-५० ग्यालेक्सी ए-३० नामक स्मार्टफोन सार्वजनिक गरेको हो ।
बजारमा आएका दुईवटै स्मार्टफोनमा ट्रिपल क्यामेरा सेटअप गरेर लन्च गरिएको हो । यी दुबै फोन ग्यालेक्सी ए-५० र ग्यालेक्सी ए-५० को नयाँ भर्सन रहेको कम्पनीले जनाएको छ । यी दुबै फोनमा नाइट मोड, सुपर स्टिडी भिडियो र प्रिमियम फिचर सामेल गरिएको छ । नयाँ फोनका मुख्य विशेषता यस्ता छन् :
एन्ड्रोइड ९.० पाइमा चलाउन सकिने
स्यामसङ ग्यालेक्सी ए-५० मा ६. ४ इन्चको फूल एचडिप्लस इन्फिनिटी यु सुपर एमोलेड (२३४०x१०८० पिक्सेल) डिस्प्ले छ । यो फोनमा १० एनएम एक्सिनोस ९६११ चिपसेट छ जसलाई एआई गेम बुस्टरसँग लिन सकिन्छ । यो एन्ड्रोइड ९.० पाइमा आधारित छ ।
त्यस्तै ग्यालेक्सी ए-३० मा ६. ४ इन्चको एचडीप्लस इन्फिनिटी भि सुपर एमोलेड डिस्प्ले राखिएको छ र यो डिस्प्लेको रिजोलुशन १५६०x७२० छ ।
फोनले फास्ट चार्जिङलाई सपोर्ट गर्छ
ग्यालेक्सी ए-५० र ए-३० मा ४ हजार एमएएच ब्याट्री छ जसले १५ वाटको फास्ट चार्जिङलाई सपोर्ट गर्न सक्छ । यदि ब्याट्री पूरा चार्ज भएमा फोनलाई दिनभर चलाउन सकिने कम्पनीले बताएको छ ।
साथै यी दुबै फोनमा ४ जिबि र्‍याम र ६४ जिबी स्टोरेजसँगै अक्टा कोर एक्सनोस ७९०४ प्रोसेसर राखिएको छ । यसको इन्टरनल मेमोरी कार्डको मद्दतबाट ५१२ जिबीसम्म बढाउन सकिन्छ ।
ग्यालेक्सी ए-५० मा ट्रिपल रियर क्यामेरा राखिएको छ जसमा ४८ पिक्सेलको प्राइमरी क्यामेरा, ५ मेगापिक्सेलका डेप्थ सेंसर र ८ मेगापिक्सेलको अल्ट्रा वाइड एंगल लेन्स जडान गरिएको छ । साथै ३२ मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामरा समेत छ ।
इमेल एपबाट ह्याक हुने जोखिममा आइफोन प्रयोगकर्ताहरु, यसरी बचाउनुहोस् आफ्नो डिभाइस
फोटोग्राफीमा रुचि छ भने यी स्मार्टफोनहरु छन् उत्कृष्ट
मेडिकल उपकरण बनाउन नासाको ‘टास्क फोर्स’ गठन
भारतले विकास गर्‍यो १० मिनेटमा नतिजा दिने टेस्ट किट, मूल्य कति ?